Home Wararka Farmajo Caddaaladda muxuu ku falayaa haddii ay isaga u daran tahay
Farmajo Caddaaladda muxuu ku falayaa haddii ay isaga u daran tahay
Iyadoo xaalladda dacwadda Ikram Tahlil ay meel adag mareyso ayaa waxaa uu sheegay Xildhibaan Mahad Salad inay soo baxayaan xogag hor leh oo xanuun badan isla markaana ka hor imanaya dowladnimada, diinta islamka iyo dhaqana ummadda
Qoraal uu soo dhigay bartiis Facebook ayuu ku sheegay in Farmajo uu aad diidan yahay laba arrin oo haddii uu ogolaado keeneya baaris caddaalad ah taas oo lagaha la geli karta meelo in lagu ceeboobo iska dhaafe jariima xukun adag u baahan noqonaya. Labada qodob ayaa uu xildhibaaka ku sheegay:
1- In dacwadda Ikraam Tahliil laga soo celiyo maxkamadda oo xaal mastuur lagu dhameeyo si aysan Duqa iyo inta ku dhow aan loo maxkamadeyn.
2-In Gen. Bashiir Goobbe aan la geyn NISA si uusan u sameyn baaris madax bannaan.
Qoralaka Xildhibaanka halkaan ka akhriso:“Farmaajo wuxuu ku dheganyahay: Kiiska Ikraan Tahliil waa in maxkamada laga soo celiyo si Fahad loo badbaadiyo. Taliyaha NISA waa inaan anigu soo magacaabo, si loo baabi’iyo raadka kiiska Ikraan!
Kiiska Ikraan inta la malaynayo waa ka weyn yahay waxaana soo baxaya xogo hor leh oo hadii ay run noqdaan ceeb iyo foolxumo aan la arag oo la maqal ku ah Dowladnimada Soomaaliya, Dhaqankeena suuban iyo Diinteena Islaamka!”
Runtii waa wax xanuun badan madaxweyne aan Xasan Sheekh ku badalanay inuu maanta halkaan dalkeenna soo joojiyo, gaarana heer uu qof Somali ah, muslim ah, haween ah, gabar la dhalay ah, aqoonyahan ah oo haddana ahayd shaqaale khater dalkeeda ugu shaqeyneysay in maanta uu caddaalad u diidan yahay Madaxweynihii laga filayey inuu caddaaladda Ilaaliyo.
Somalida cidda ay hogaanka u dhiibaneyso haka fiirsato ku day iyo ku eeg ma galo hoggaan umadeed ee waa inuu yahay qof ugu yaraan la yaqaan qaddiyadaha qaar meelaha uu ka taagan yahay.